Soo saaraha Laser Golf Rangefinder, Heesaha Goolafka Ugu Fiican Qiimaha | Wixii intaa dhaafsiisan
Isboortiga ka baxsan ayaa dabooli kara baahida kooxaha macaamiisha kala duwan oo leh alaabooyin kala duwan oo golf ah.
Qalabka Gargaarka Golf
Guri > Alaabta > Laser Golf Rangefinder
Kala soocida golf-ka Laser Telescope
Maxaan ugu baahanahay Golf Laser Rangefinder? Waxyaabaha ugu adag ee la cabiro marka aad ciyaarta ku cusubtahay waa masaafada. Mid ka mid ah waxyaabaha “pro-kii hore” dhib ku qabay waa fogaanta. Xaqiiqdu waxay tahay, kulligeen dhibaato ayaan ku qabnaa qiyaasta masaafada. Saxnaan ka sarreysa oo ah ds 0.3 yaard oo u dhexeysa 200yar, oo keliya Meelaha baarayaal ka baxsan ayaa la kulmi kara saxnaantaan sare ee suuqa; Sax ku ah ± 0.55 yards laga bilaabo 200-660yards; Qiyaasaha Yarada ama Meter; Qaabab badan (qaabka iskaanka calanka loo yaqaan 'Flapole scanning', jiirada golfka la hagaajiyay, cabirka xawaaraha) Cabbir khafiif ah & isafgarad leh (wuxuu geli karaa jeebka): jeebka-cabbirka (110 * 65 * 38mm), Miisaan khafiif ah (164g) ， aad uga yar kana fudud kana-baareyaasha kale. Batariga lithium CR2 3V ee muddada dheer soconaya waxaa ku jira: 5000 jeer oo otomaatig ah ayaa damiya 8 ilbidhiqsi kadib Ergonomic, naqshad jilicsan oo jilicsan (ABS + PP), kuwa kale waa uun PP, goobaheena golf-ka ayaa ku siinaya khibrad fiican. 6x weyneynta oo leh HD nidaam udhaxeeya dherer go'an go'an, Bright, monocular qaraar sare; Biyaha iyo raha cadeyn; Xitaa si sax ah oo dheeri ah, Baadi goobaha kala duwan ee golf leh magdhow goolaf ah wuxuu si otomaatig ah u xisaabiyaa masaafada kore ama hoose iyo muujinta oo ay la socdaan masaafada si aad u garaacdo, si aad u xulan karto naadiga saxda ah oo aad kubbada ugu kalsoonaan karto. Tiknoolajiyadda Heshay Calanka Hormarinta ayaa miiraya calanka ka soo baxa walxaha asalka ah (laamaha iyo cawska) iyagoo hubinaya inaad calanka toogato. Mudnaanta Bartilmaameedka Koowaad waxay qabsan kartaa bartilmaameedka koowaad / ugu dhow ee ka mid ah cabbiraadaha badan ee la helay, adigoon sugin tilmaame labaad, sida gariirka. Batariga lithium CR2 3V ayaa lagu daray, wuxuu isticmaali karaa ugu yaraan 3000 jeer oo lagu daray, si otomaatig ah ayuu u demiyaa 8 ilbidhiqsi kadib.$ $> Qalab adag oo waara oo xambaarsan dahaadh jilicsan oo si fudud loo heli karo, oo aan sahlaneyn in la beddelo, laga ilaaliyo kuwa raadiyaha kala duwan saameynta iyo hoos u dhaca. Si sahlan loo qaado, oo leh suunka xiran iyo biraha lagu dhejiyo boorsada golf, ayaa laga ilaalin karaa dhicitaanka, oo ku habboon golf, ugaarsiga, buurta fuula, iyo dibedda iyadoo la isticmaalayo, Biyo-ilaaliye. Waxaa ka mid ah suunka suunka haddii aad rabto inaad qaadatid baadi-goobkaaga oo dhan adigoon haysan boorsadaada golf-ka. Faahfaahinta Mini Golf Rangefinder; Range: 600m Midab: (Madoow, Casaan, Buluug, Caddaan, Cawl, Casaan) Nooca batteriga: 3V, CR2 * 1 Cutubyada: M / YD Sax: ± 0.5m Nooca Laser: 905nm Badbaadada indhaha: FDA (CFR 21) Muuqaalka berrinka: 7 ° Weyneynta: 6X Ujeeddo len len: 22mm Dhexdhexaad isha gabal: 16mm Dhexdhexaadiyaha ardayda ka baxa: 3.7mm Qashin-qubka: D 5D Qaabka isku hagaajinta qashin-qubka: Is-hagaajinta muraayadaha indhaha Heerkulka hawlgalka: 0 ° c- + 40 ° c Muuqaalka: LCD Cabir: 110 * 65 * 38mm Miisaanka bilaa bateri (g): 164g MOQ: 1 dhigay
Warshadda Teleskop-ka ee raadinta kala duwan ee golf-ka ugu fiican
Maxaan ugu baahanahay Golf Laser Rangefinder? Waxyaabaha ugu adag ee la cabiro marka aad ciyaarta ku cusubtahay waa masaafada. Mid ka mid ah waxyaabaha “pro-kii hore” dhib ku qabay waa fogaanta. Xaqiiqdu waxay tahay, kulligeen dhibaato ayaan ku qabnaa qiyaasta masaafada. Saxnaan ka sarreysa oo ah ds 0.3 yaard oo u dhexeysa 200yar, oo keliya Meelaha baarayaal ka baxsan ayaa la kulmi kara saxnaantaan sare ee suuqa; Sax ku ah ± 0.55 yards laga bilaabo 200-660yards; Qiyaasaha Yarada ama Meter; Qaabab badan (qaabka iskaanka calanka loo yaqaan 'Flapole scanning', jiirada golfka la hagaajiyay, cabirka xawaaraha) Cabbir khafiif ah & isafgarad leh (wuxuu geli karaa jeebka): jeebka-cabbirka (110 * 65 * 38mm), Miisaan khafiif ah (164g) ， aad uga yar kana fudud kana-baareyaasha kale. Batariga lithium CR2 3V ee muddada dheer soconaya waxaa ku jira: 5000 jeer oo otomaatig ah ayaa damiya 8 ilbidhiqsi kadib Ergonomic, naqshad jilicsan oo jilicsan (ABS + PP), kuwa kale waa uun PP, goobaheena golf-ka ayaa ku siinaya khibrad fiican. 6x weyneynta oo leh HD nidaam udhaxeeya dherer go'an go'an, Bright, monocular qaraar sare; Biyaha iyo raha cadeyn; Xitaa si sax ah oo dheeri ah, Baadi goobaha kala duwan ee golf leh magdhow goolaf ah wuxuu si otomaatig ah u xisaabiyaa masaafada kore ama hoose iyo muujinta oo ay la socdaan masaafada si aad u garaacdo, si aad u xulan karto naadiga saxda ah oo aad kubbada ugu kalsoonaan karto. Tiknoolajiyadda Heshay Calanka Hormarinta ayaa miiraya calanka ka soo baxa walxaha asalka ah (laamaha iyo cawska) iyagoo hubinaya inaad calanka toogato. Mudnaanta Bartilmaameedka Koowaad waxay qabsan kartaa bartilmaameedka koowaad / ugu dhow ee ka mid ah cabbiraadaha badan ee la helay, adigoon sugin tilmaame labaad, sida gariirka. Batariga lithium CR2 3V ayaa lagu daray, wuxuu isticmaali karaa ugu yaraan 3000 jeer oo lagu daray, si otomaatig ah ayuu u demiyaa 8 ilbidhiqsi kadib.$ $> Qalab adag oo waara oo xambaarsan dahaadh jilicsan oo si fudud loo heli karo, oo aan sahlaneyn in la beddelo, laga ilaaliyo kuwa raadiyaha kala duwan saameynta iyo hoos u dhaca. Si sahlan loo qaado, oo leh suunka xiran iyo biraha lagu dhejiyo boorsada golf, ayaa laga ilaalin karaa dhicitaanka, oo ku habboon golf, ugaarsiga, buurta fuula, iyo dibedda iyadoo la isticmaalayo, Biyo-ilaaliye. Waxaa ka mid ah suunka suunka haddii aad rabto inaad qaadatid baadi-goobkaaga oo dhan adigoon haysan boorsadaada golf-ka. Range: 600m Midab: (Madoow, Casaan, Buluug, Caddaan, Cawl, Casaan) Nooca batteriga: 3V, CR2 * 1 Cutubyada: M / YD Sax: ± 0.5m Nooca Laser: 905nm Badbaadada indhaha: FDA (CFR 21) Muuqaalka berrinka: 7 ° Weyneynta: 6X Ujeeddo len len: 22mm Dhexdhexaad isha gabal: 16mm Dhexdhexaadiyaha ardayda ka baxa: 3.7mm Qashin-qubka: D 5D Qaabka isku hagaajinta qashin-qubka: Is-hagaajinta muraayadaha indhaha Heerkulka hawlgalka: 0 ° c- + 40 ° c Muuqaalka: LCD Cabir: 110 * 65 * 38mm Miisaanka bilaa bateri (g): 164g MOQ: 1 dhigay